Sawirada dhar - Fikradaha Fikradaha Tattoos
sawirrada macnaha leh
Sawirada Japanese waxay caan ku yihiin macno badan iyo ujeedo. Tattoo Japanese wuxuu ku yimaadaa muuqaalo iyo qiyaaso kala duwan. Waxyaabaha matalaya tattoo waxay sidoo kale u sheegaan sheekooyinka astaamaha sida Koi kalluunka iyo masduulaada. Wadaaddadu waxay la xidhiidhaa hanti, xoog iyo xoog. Markaad aragto shaati-tiknoolajiyada quruxda badan oo qurxoon, waxaa lagugu qasbi karaa inaad weydiisato macnaha tattoo. Waxaa jira dhowr sawir oo kaliya oo kaa dhigaya inaad joojiso oo aad dalbato macnaheeda. Mid ka mid ah shaati-galada noocan oo kale ah waa tafaarada masiixiga ee ku yimaadda kala duwanaanta iyo qaababka. Sida habka tattoo uu yahay mid xiiso leh ayaa kaa tagi doona inaad ka mahadceliso xaqiiqda ah in ay tahay mid qalaad iyo qurux badan.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda naqshadeynta japanese ee ugu dambeeyay ragga iyo dumarka.
Lindhiyada waxaa inta badan loo isticmaalaa dumarka si ay uga hadlaan waxqabadka suuban iyo dabacsanaanta. Waxaa lagu rinjiyeyn karaa midab kala duwan, dabeecad ama qaab. Dibnaha cas ayaa loo isticmaali karaa inay ka hadlaan dhunkashada iyo riwaayadda galmada marka la geynayo meelaha u dhow sida caloosha, miskaha, qoorta, iwm. Tan waxaa lagu rinjiyeeyn karaa meelo badan oo jirka ka mid ah oo ka tagi doona dareenka dhunkashada. Dibnaha casaanka ee la yimaada carrabka waxaa loo isticmaali karaa in lala xiriiriyo maqnaashaha. Dibnaha cas ayaa loo isticmaali karaa inay ka hadlaan mawduucyo erotic ah oo xasaasi ah. Sidoo kale ka hadal mowduucyada miisaanka oo aad ku biiri kartid.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta lafaha ugu dambeeya ee ragga iyo dumarka.
Tilmaamaha shaashadda ah
Tattoo yar-yar ayaa laga yaabaa in uu yar yahay laakiin macnaha waa wax aad u weyn. Tattoo ayaa soo jiidata dareen badan, waxaana loo adeegsadaa inay matalaan maandooriye, niyadjab, is-qadarin naftiisa, is-dilid iyo sidoo kale rabitaanka nolosha. Ereyga 'semicolon' ayaa ka hadlaya macnaha nolosha, si loo xaqiijiyo dadka in dhamaadka uusan imaan. Maanta, semicolonku wuxuu noqdaa calaamad tattoo ah in kuwa ku dhibtooday inay ku noolaadaan si ay u xasuusiyaan inay leeyihiin wax ay ku nool yihiin. Waxaa jira noocyo kala duwan oo tattoo ah oo aad adigu tahay mid lagu go'aamiyo sida aad u rabto joornaaladaada si aad u eegto. Dhamaadka maalinta, semicolonku wuxuu u taagan yahay wax ka weyn oo ka sii macno badan oo aad ku qanci kartid.
Kuwa la doorto waxay ku dhejin karaan tattooankan inay u sheegaan waxa ay yihiin. Tattoo-gu waa mid caadi ah waxayna ku dhiirrigelin kartaa dadka inay raacaan riyadaada. Waxaad runtii heli kartaa waxyiga aad u baahan tahay marka aad ku dhejisid shaati-galada jirkaada. Waxay ka qaadataa madax-bannaanida qofkii ku habboon. Waxay ku saabsan tahay is-xakamaynta, waxayna sidoo kale ka hadlaysaa furfurnaanta qofka leh tattoo-ga.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda naqshadeynta sawir-gacmeed ee ugu dambeeyay ee ragga iyo dumarka.
Sawirada yaryar ee macnaha leh waxay kaa caawin kartaa inaad metesho waxyaabo badan oo kugu dhacaya. . Qaar badan oo ka mid ah dadka ku dhejiya waxay aaminsan yihiin in ay saameyn ku yeelato awoodda sarraysa iyo sidoo kale asal ahaan, waxay muujinaysaa taariikhda iyo sayniska. Dadka isticmaala tattoo-ta waxaa laga yaabaa inaanay xiiseynin macnaha kor ku xusan sababtoo ah tattoo dayaxa waxay leedahay macno badan. Boorashka buluuga ah wuxuu ka dhigan yahay kantaroolka maskaxda ee jirka. Waxay u taagan tahay xigmad, sirdoon iyo aqoon. Noocyada buluugga ah waxay u taagan tahay aragtida qarsoon ee diinta. Tattoo octopus ayaa sidoo kale macnaheedu yahay in ay rajo ka qabaan mustaqbalka. Awoodda qotada dheeraadka ah ee loo sameeyo waxyaabo badan oo ay weheliyaan xubnaheeda badani waa waxa dadka ka dhigaya in ay aaminsan yihiin in abuurku yahay mid isku dhafan. Tattoo tufood waxay macnaheedu noqon kartaa fikradda xorriyadda maxaa yeelay waxay la xiriirtaa shimbiraha. Shimbiraha waxaa loo tixgeliyaa xayawaan lacag la'aan ah waana taas sababta ay u duuli karaan hal qayb oo adduunka ah. Hal ama xitaa baalasha kala duwan ayaa ka hadli kara raadinta xorriyadda.
Dhammaan kuwan iyo dhar-gooyooyin badan ayaa loo isticmaali karaa iyagoo metelaya waxyaabo badan, inkastoo ay yar yihiin qeyb kasta oo ka mid ah jirka.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda naqshadeynta yar ee yar-yar ee ragga iyo dumarka.
Tattoo Angel ma aha arrin ah sababtoo ah macnaha quruxda leh in ay la yimaadaan. Waa inaad aragtay xagasha leexatay oo leh macneheedu. Waxba malaha sida malaa'igta laguugu soo dhejiyey, waxay wali ku siineysaa macne gaar ah. Tattoo malaa'igtu uma taagna waxyaabo taban. Waxay ka wada hadlaan caqabadaha hortaagan ama guuritaanka dhibaatada nolosha. Kuwani waa qaar ka mid ah macnaha ay la imanayaan tattoo angel.
Macnaha malaa'igta ayaa sidoo kale isbedeli kara habka uu qofku u isticmaali karo. Dareemis iyo hufnaan ayaa wakiil u noqon kara malaa'igta dumarka halka ragga ay awood u yeelan karaan malaa'igta sida ay doonayaan. Iyadoo baalasha, malaa'igta u taagan wax wax ka duwan. Malaa'igta waxaa lagu dhejin karaa calaamad kasta si ay u yeelato macnaha gaarka ah. Markaad u socoto tattoo malaa'igta, waa lagama maarmaan inaad haysato fikrad sax ah inaad turjumo malaa'igtaada waxa aad rabto inaad ka dhigto.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda ugu dambeysa ee sawirrada tattoos ee ragga iyo dumarka.
Xirfad tattoo macnaha
Tattoo-istaaggu wuxuu u taagan yahay calaamad xooggan iyo xasillooni. Miyaad horay u aragtay tattoo qalabka? Tattoo Tani waxaa lagu bilaabay sanado badan kahor Soomiya. Tattoo wuxuu noqday mid ka mid ah adduunka ugu da'da weyn adduunka, waxaana sidoo kale loo isticmaali jiray Masiixiyadii hore. Tani waxay ahayd markii lagu silcey sababtoo ah waxay aaminsan yihiin. Waxaa ka mid ah adeegga badaha ee hay'adaha badda sida: badda, awood, amniga iyo amniga,
Tattoo boodhka ayaa loo isticmaalay in lagu sheego sheekooyin badan. Waxa loo adeegsaday calaamad iskutallaabta iyo sidoo kale ka hadlayay Ciise Masiix iyo siliciyadiisa on iskutallaabta. Waxa kale oo ay ka hadlayaan awoodda ragga iyo dumarka in qof kastaa isticmaali karo. Maanta, qalabka ayaa lagu dari karaa alaab kale si uu u siiyo macnaha kale. Tilmaaminta anchor waxaa loo isticmaalaa xidhiidhka cusub, sababtoo ah waxay calaamad u tahay awoodda ay ku sii jiri karto inta lagu jiro wakhtiyada dhibaatada. Maaddaama aysan jirin dhaleeceyn badan oo la xidhiidha tattooska qarnigii 21st, tattoo-ta xaddidan ayaa caan ku ah bulshada guud ahaaneed sababtoo ah macnaha iyo calaamadaha la xidhiidha. Had iyo jeer waxaa jira sheeko ku saabsan tattoo oo ku xiran jidhka. Waa qofka kaliya ee xiran kara oo u sheegi kara sheekooyinka kuwa kale.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta ugu dambaysa ee loogu talagalay ragga iyo dumarka.
Aqoonsiga Tattoo Macnaha
Arrow waxaa loo yaqaan calaamad muujinaysa Maraykanka Dhaladka Aasiya wuxuuna noqday mid ka mid ah waxyaabaha ka hadlaya tattoo. Marka fuulladu ka soo baxdo, waxay ka hadlaysaa saaxiibtinimo iyo marka la tixgeliyo awood ahaan marka ay xidhantahay. Markuu fallaadhi ku dhex maro dheeman, waxaa loo yaqaanaa dhiirranaan halka foornada bidix loo yaqaan difaac iyo difaac.
Marka lagu sawiro calaamad dheeman, waxay u matali kartaa geesinimo sidii hal talaabo horay loo sii wadi lahaa. "Waxa kale oo ay yiraahdaan, fallaadhaha qaaska ah waxay u taagan yihiin difaac iyo ilaalin waxyeello. Waxa kale oo loo isticmaali karaa calaamad dhaqdhaqaaqa ama jihada. Gawaaridu waxay noqon karaan kuwo qabow oo waa loo habeyn karaa iyadoo la raacayo gogol daaqada '. Midabka, jumlada iyo habka loo sawiray waa waxa ka dhigaya fallaadada shaashadda mid ka mid ah kuwa ugu fiican dhinaca qaybta jirka dadka. Iyadoo sawirka fallaagada, ragga ama dumarku waxay qaadi karaan naqshado muuqaal leh si ay u eegaan jilicsanaanta. Gaar ah oo ka mid ah shan fallaad ayaa u taagan xoog, laakiin hal fallaadh ayaa si fudud loo jebin karaa. Dhalinyaro farduhu way adag yihiin in la jebiyo. Falaashooyinka ayaa loo yaqaanaa inay yihiin il awood u leeyihiin kuwa raadinaya siyaabo lagu maareeyo cabsidooda iyo inay ka dhex muuqdaan dadka.
Butterfly waxay ka hadlaysaa ruuxa iyo jacaylka. Waxay muujin kartaa maskax iyo xitaa jacayl, rabitaan iyo jacayl. Balwadku waa mid aad u qurux badan oo midab leh, taas oo ah sababta ugu weyn ee dumarku marwalba rabi lahaayeen in ay ku helaan jidhkooda. Farshaxanka iyo sharafku wuxuu ku faafaa marka la qoro waa mid cajiib ah. Waa shaqo ee qof xiran si uu u go'aamiyo meeshii lagu dhajin lahaa tattoo.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta balwadda casfiga ee ugu dambeyn ragga iyo dumarka.
Tattoos wuxuu uumi karaa jilicsanaanta nolosha iyo sidoo kale ka hadlaan quruxda. Dumarku way jecel yihiin maxaa yeelay waxay ka hadlaan wax badan oo iyaga ku saabsan. Waa riyo ah in ay gabdho oo raadinaya siyaabo lagu sheego sheekooyinkooda aduunka. Markaad dooranaysid shaatiillada qashinka ah, waxaad ka hadlaysaa jacaylka lumay qaar ka mid ah kuwa la khasaaray. Waxay ku timaadaa qaabab kala duwan iyo muuqaalo badanaa sida ku xusan dhaqanka oo laga soo qaaday. Dad badan oo jecel tattoo-yada waxay isticmaali karaan waxay muujinayaan waxyaabo badan.
Maanta, xitaa ragga ayaa muraayaddan qoob ka ciyaara ah ee loo yaqaan 'cherry tomato' si ay u muujiyaan sida ay ugu fiicnaan karaan marka ay timaaddo inay jecel yihiin asxaabtooda. Iyo sidoo kale in la barbardhigo la-hawlgalayaashooda sidii ay uga wada hadlaan Luck, Jacayl, Awood-darro, Nadaafad, Naxariis, Fududnimo, Xoog, Magacaabis, Dib-u-cusbooneysiin, Ku-meel-gaarnimo iyo Sharafnimo. Ubaxa wuxuu sidoo kale la mid yahay cusboonaysiinta la arko xilliga gu'ga. Sida gumeysiga guga, ubaxyada caleemaha ayaa calaamad u ah dalagyada wanaagsan, ilaalinta dalagyada iyo soo noqoshada cajiibka ah ee noloshooda ka dib casaanyo adag. Calaamadu waa shey kale oo ka dhigaya tattoo mid ka mid ah dadka jecel gaar ahaan haweenka.
Riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta jimicsiga ugu dambeeyay ee ragga la yirahdo ragga iyo dumarka.
Sababaha mid ka mid ah sababaha ay dadka u tagaan tattoo waa sababtoo ah waxa ay u taagan tahay. Tattoo-feerka ayaa leh macno kala duwan, laakiin kuwa biyaha ku jira, waa wax qiimo leh. Waxay ka dhigan tahay calaamad nasiib wacan, ilaalin iyo taageero. Tattoo wuxuu ku yimaadaa kala duwanaansho iyo qaabab kala duwan. Waxaa jira noocyo ka mid ah shaati-galada kuwaas oo leh sharraxaad badan oo ku xiran qofka xiran. Ka dib markii riyadu tahay mid ka mid ah macnaha shahaadadaada. Uma baahnid inaad meel fog u guurto si aad uga dhigto duruufahaaga nolosha dadka kale. Iyada oo taatarkan, way kuu fududaaneysaa inaad dunida u sheegto sheekada adiga oo aan cod samaynin.
Sawirada qayb kasta oo ka mid ah jirka shaati-taarku waxay kuugu sheegaysaa sababta aad u aragtay tattoo-tii hore. Waxay u taagan tahay hagid iyo jihada, sidoo kale calaamad nasiib wacan. Tani waa sababta keenta sawirro badan oo ku wareegsan oo lagu arki karo maraakiibta. Caannimada tattoo waa wax aad jeceshahay marka aad aragto mid ka mid ah. Maalmahan, ma aha ragga raba in ay isticmaalaan laakiin sidoo kale gabdhaha doonaya in ay eegaan moodada.
Halkan riix si aad u ogaato fikradda naqshadda sawirada ee ragga iyo haweenka.
Waa maxay macnaha tattoo this? Dad badan ayaa leh macne kala duwan oo ah tattoo masiixiga. Si kastaba ha noqotee, naqshadeynta taatuuntu waxay noqon kartaa warka wanaagsan, nasiib, ilaalin iyo barwaaqo. Weli waxaa jira macnooyin kale sida sixirka, caqli, dagaalyahan, dagaalyahan, awood, bacriminta, labnimada, xigmadda, xoogga, kacsiga, ruuxa, farxada iyo macnaha kale ee badan.
Waxaa jira dhowr sawir oo kaliya oo kaa dhigaya inaad joojiso oo aad dalbato macnaheeda. Mid ka mid ah shaati - yada noocan oo kale ah waa tafaarada masiixiga ee ku yimaadda kala duwanaanta iyo qaababka .Taas macneheedu wuxuu ka yimaadaa qaabab kala duwan markaad ku dhex jirto jirka. Dadka qaarkiis ayaa sidoo kale waxay ku daraan midabyo ay ku dhajiyaan tattoo maskaxeed si ay u eegaan wax aan caadi ahayn oo loo qaabeeyo nadiifintooda. Tattoo this waxaa la gelin karaa qayb kasta oo jirka ah oo weli sheekada u sheegi doonaa in loo jeedo in la sameeyo. Muhiimadda iyo macnaha tattoogu waa waxa soo jiidata dad badan oo jecel dareenka sawirada.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta jimicsiga ugu dambeeyay ee ragga iyo dumarka.
Macnaha tattoo maroodiga ah macnaheedu waa dadka kala duwan. Elephant waxay noqon kartaa nabad, awood iyo awood. Waxay calaamad u tahay kuwa raadinaya isgaarsiinta, xikmad, nasiib wacan iyo guul. Dadka qaarkood waxay u tixgeliyaan sida bacriminta halka kuwa kale ay u qaataan sida kalgacal, tixgelin, dulqaad iyo xakameyn.
Maroodiyaasha ayaa sidoo kale la tixgeliyaa daruuro iyo barwaaqo, sharaf leh, farxad, xusuus, go'aan iyo aragti la'aan. Tilmaamaha dhejiska ah waxay ku yimaadaan qaabab kala duwan iyo cabbirro kala duwan. Si kastaba ha noqotee, waa shaqo ee qof xiran si uu u go'aamiyo meeshii lagu dhajin lahaa tattoo. Qofkasta oo jecel tattoo tani waxa uu doorbidaa macnaha oo wuxu kuu sheegi karaa halka ay ka isticmaalayaan tattoo meesha ay ku qoranyihiin. Maroodiga wuxuu u taagan yahay barwaaqo, Xassan, ?? Farxad, ?? Nobility, ?? Go'aaminta, Sheegashada iyo naxariista.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda naqshadeynta dharka cusub ee maroodiga ee ragga iyo dumarka.
Koi Fish Macnaha
Kalluunka Koi wuxuu noqon karaa noocyo kala duwan oo cabbir iyo midab leh oo macnaheedu yahay. Qaar ka mid ah dadka xiran waxay sheegaan in ay tahay sababta ay u wajahanyihiin dhibaatada ay ku wajahayaan in ay isticmaalaan khadadka, halka qaarkood ay u isticmaalaan si ay u hubiyaan in wax walba ay tahay inay u hogaansamaan. Taas macnaheedu waa saaxiibtinimo, jacayl dhiirran, madaxbannaan, awood, nasiib wacan, nolol dheer, barwaaqo, masruuf iyo horumar.
Midabada ay tintu ku yimaadaan adoo siinaaya waxyaabo badan oo kale. Waxay calaamad u tahay nasiib wacan, jacayl iyo nasiib wanaag. Waxaad go'aansan kartaa midabka iyo qaabka tattoo-ga. Nidaaminta waa mid aad u muhiim ah taas oo ah sababta aan u aragno qaababka kala duwan ee kalluunka ee koosyada qaybaha kala duwan ee jirka. Abuurista tattoo waa mid cajiib ah. Ubaxyo badanaa waxaa lagu sawiraa tattoos. Boorashka buluuga ah wuxuu ka dhigan yahay kantaroolka maskaxda ee jirka. Waxay u taagan tahay xigmad, sirdoon iyo aqoon. Noocyada buluugga ah waxay u taagan tahay aragtida qarsoon ee diinta. Khudbada casaanka ah ee la yiraahdo Buddha halka fuudka casaanka ahi ka hadlayo wadnaha, naxariis iyo jacaylka oo ay ku jiraan jacaylka.
Koi kalluunka sidoo kale waxay u taagan tahay guusha iyo habka casriga ah ee lagu beegsanayo dhibaatooyinka iyo caqabadaha kuwa u baahan taageero.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda naqshadeynta ugu dambeysa ee koi balaaran ee ragga iyo dumarka.
Tartanka libaaxa marwalba waa la foorjiray, waxaanay ka hadlaysaa kibirka, geesinimada, royalty iyo xoog. Waxaa jira macnooyin kala duwan sida dhaqamada. Asal ahaan wuxuu kaloo macnaheedu noqon karaa Purity, Power, Bravery, Courage, Loyalty, Nobility, Ilaalinta, Daacadnimo, Xoog, Daacadnimo iyo Maamulka. Muxuu yahay tattoo libaax waa mid aad u muhiim ah taas oo ah sababta dad badani rabi lahaayeen inay ogaadaan muhiimada waxa ay yihiin. Farshaxanku waa qurux badan oo dabooli kara farshaxanka jidhka xitaa qaybaha ugu yar sida faraha.
Aragtida laga hadlayo libaaxyada ayaa ah waxa iyaga ka dhigaya mid ka mid ah shaati-galada ugu fiican si loo qoro. Laba libaax oo dib loo soo celiyo dibna waxay nooga sheegaan qorraxda iyo qorraxyada ama xitaa Bariga imanaya si ay ula kulmaan Galbeedka. Asalku wuxuu ka hadli karaa hanuuninta waxaana laga arki karaa meelo qaddarin leh ama la ixtiraamo oo adduunka ah.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadaynta lion-ka cusub ee ragga iyo dumarka.
Laylisyada Lotus waxay noqon karaan kuwo adag oo naqshadahooda tattoo macno leh waxay sameeyeen iyaga si cajiib ah. Midabada tattoo waa waxa ay siiyaan macmalka sawirrada badan ee kala duwan. White lotus ayaa ka hadlaysa maskaxiyan iyo ruux ahaaneed. Waxay ka hadlaysaa daahfurka iyo daahirnimada.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo shaati ah oo aad u isticmaali karto bedelida habka aad u eegi karto. Qaado tusaale ahaan, baadadaha ku yimaada qaababka iyo qiyaasaha kala duwan. Ma jiro qayb ka mid ah jirka oo aysan ku haboonayn. Maxay tahay macnaha tattoo? Dad badan ayaa leh macno kala duwan. Tumba Lotus waa calaamad taas oo ah sababta ay dadku si fudud ugu tagaan iyaga gaar ahaan kuwa diinta ah kuwaas oo u arkaan macno badan oo leh tattoo qurux badan. Waxaa laga soo qaadi karaa kalluunka kalluunka si loo helo macne kale oo cajiib ah oo ah jacayl, guul, nasiib wacan, karti u leh adkaynta caqabadaha iyo khatarta.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda naqshadeynta sawirrada ee ugu badan ee ragga iyo dumarka.
Tattoo tufood waxay macnaheedu noqon kartaa fikradda xorriyadda maxaa yeelay waxay la xiriirtaa shimbiraha. Shimbiraha waxaa loo tixgeliyaa xayawaan lacag la'aan ah waana taas sababta ay u duuli karaan hal qayb oo adduunka ah. Hal ama xitaa baalasha kala duwan ayaa ka hadli kara raadinta xorriyadda. Sidoo kale, baaliga ayaa si siman uga hadlaya waxyaalaha ka hadlaya dhaqdhaqaaqa, fikradaha, karti u lahaanshaha dhexgalka iyo caqliga. Toogashadu waxay u matali kartaa kuwii geeriyooday, xidhiidhkii lala lahaa dadka dhintay.
Sawirada tufaaxa ayaa ah qaar ka mid ah sawirada ugu fiican ee aad arki karto hareeraha. Waa dhif iyo khaas. Ma aha qof walba oo aad ku aragto shaati-tikaasta. Marka aad raadineyso naqshad tattoo ah si aad u raadiso xorayntaada, tattoo tani waa mid ka mid ah inaad tagto sababtoo ah quruxda iyo muhiimada. Waxay sidoo kale ka dhigan yihiin hadiyado ay ka imanayaan samada. Baalalka sidoo kale waxaa loola jeedaa Xorriyadda, Xaqiiqda, Nacnaanta, Xawaaraha, Karaawaxa, Duulinta, Sareeya, Riyo, Nabadgelyo, Duco, Ballan, Walaac, Rajo, Isgaadhsiinta dhinaca kale, Socdaalka Nafta, Socdaalka, Mushkiladda, Dhaqdhaqaaqa iyo Miisaanka. Tattoos si qurux badan ayaa loogu talagalay inay ku siiso aqoonsiga aad u baahan tahay. Waxaa jira noocyo kala duwan oo shaati ah oo aad u isticmaali karto bedelida habka aad u eegi karto.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta filimada ugu dambeysa ee ragga iyo dumarka.
Owl Tattoo Macnaha
Tilmaamaha Owl waxaa loogu talagalay kuwa jecel qarsoodiga mugdiga ama xitaa shisheeye. Tilmaamaha Owl waxaa loo isticmaalaa in lagu matalo Habeenkii Soomaliya iyo dhulkii aan la aqoon.
Owl wuxuu u taagan yahay rajo laga qabo xilliyo cabsi leh ama murugo leh. Fikradda xooggan ee guurka ee habeenkii sababtoo ah aragtida quruxda badan ayaa dadka ku dhibaysa. Waxay macnaheedu noqon kartaa markhaati ah in uu jiro iftiin marka la dhameeyo tunnelka. Muxuu yahay tattoo wuxuu noqon karaa awood, sixir, riyo, cad, hanuunin, garasho, xikmad, wacyigelin iyo badbaadin.
Waxa kale oo loola jeedaa xiriirka magic, xoog iyo riyooyin fiican. Dumarka waxaa loo qaadan karaa siyaabo badan oo ay ku dhamaato macno weyn oo aad jeclaan lahayd. Tartanka guurka wuxuu noqon karaa xusuusin qof geeriyoodey iyo sidoo kale in dhammaanteena noloshaani ku noolaan doonaan si buuxda.
Noocyada gogoladu sidoo kale waxay leeyihiin macnahooda sida sonkorta caaga ah ee caan ah oo badanaa loo yaqaan 'tofuka lagu yiraahdo tafaariiqda ee Mexico ama tattoo nacnaca'. Tusaale ahaan dadka reer miyiga ah waxay jecel yihiin Maalinta Tafafiraha Dhimasho sababtoo ah doorka ay ka dhigan tahay. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo kan kan jirka ah u baran karo si uu isbeddel sameeyo. Dhamaadka maalinta, waa qofka xiran, oo si sahlan uga hadli kara waxa tattoo macnaheedu yahay.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda naqshadeynta guurka ee ugu dambeeyay ee ragga iyo dumarka.
Tattoo Rose macnaheedu yahay
Rose wuxuu muujiyaa jacayl. Kuwa jacaylku waxay si sahlan u aqoonsan karaan tattoo kacda. Marka aan la gashanayn thorns, macnaheedu waa in aan jirin wax allabari in la sameeyo marka la jecel yahay, ka dibna, marka qodax, waxaa loola jeedaa inay jiraan wax allabari in la sameeyo. Quruxda aan dhammaadka lahayn waxay tahay waxa kor u kacay waxay kaloo macnaheedu noqon kartaa dadka qaarkood. Badmareenada qaarkood waxay doortaan tattooankan sababta oo ah ujeeddooyin gaar ah. Waxa kale oo lala xiriiriyaa dumarka oo inta badan la xidhiidha dumarka gaarka ah ee ka baxaya inta lagu jiro safarada. Xataa qaar ka mid ah ilaahyada waxaa lagu qeexay tattoo this. Rose waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in laga hadlo dheelitirka. Qulqulka waa maalmo marka qaboobaha ay kaliya yihiin dumarka.
Maanta, xitaa ragga ayaa muraayadda tattoo tusaya si ay u muujiyaan sida ay ugu fiicnaan karaan marka ay timaaddo inay jecel yihiin asxaabtooda. Waxa loola jeedaa Jacaylka, Dib-u-Celinta iyo Dib-u-ceshiga, Ruuxnimada iyo Runta, Isbeddelka, Naxariista iyo Jirka, Naxariista iyo Dumarka. Farshaxanka iyo sharafku wuxuu ku faafaa marka la qoro waa mid cajiib ah. Waa shaqo ee qof xiran si uu u go'aamiyo meeshii lagu dhajin lahaa tattoo. . Farshaxanku waa qurux badan oo dabooli kara farshaxanka jidhka xitaa qaybaha ugu yar sida faraha. Muhiimadda maxaliga ah ee tattoo waxay ku xiran tahay habka uu qofka u diidey inuu ka fikiro waxa ku saabsan.
Halkan riix si aad u ogaatid ugu dambeyntii fikradda naqshadda sawirrada ee ragga iyo dumarka.
Tawxiidka qabiilka macnaha
Tattoo Qabiilku wuxuu u taagan yahay xoog ama geesinimo si looga gudbo caqabadaha. Muxuu yahay qabiilku wuxuu ka yimaadaa dhaqanka ama meelaha ama xataa xaafadda. Waxay bilowday maalmaha hore markii dadku ay helaan aqoonsigooda oo loo maro tattoos. Tattoo Qabiil waxaa loo isticmaalaa in laga hadlo rumaysiga ruuxiga ah ama diinta. Waxaa loo isticmaalaa sidii xayiraad ama xitaa badbaadinta. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sheekooyin sheegaya in qofna uusan awoodi karin inuu sheego marka laga reebo qabiilka ka soo jeeda tattoo qabaailka. Uma baahnid inaad meel fog u guurto si aad uga dhigto duruufahaaga nolosha dadka kale. Iyada oo taatarkan, way kuu fududaaneysaa inaad dunida u sheegto sheekada adiga oo aan cod samaynin.
Tattoo qabaailku wuxuu leeyahay macnooyin badan wuxuuna muujin karaa midnimada. Wareegga ku saabsan tattoo wuxuu ka hadlayaa dhererka iyo isu-dheelitirka iyo sidoo kale daa'in, markaad eegto masaafada oo dhan ka soo jeedda xariiqda hoose ilaa dhammaan qodobada. Diin aad u badan ayaa ka faa'iideysanaya si ay u sheegaan waxyaabo badan oo ay aaminsan yihiin. Tattoo wuxuu u taagan yahay nuxur, sharaf, naxariis, daacadnimo, daacadnimo iyo kalsoonida. Tattoo waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in laga hadlo xayawaanka, awoodda iyo khibradda. Waxaa lagu muujin karaa waxyaabo dhif ah oo gaar ah sida barafka, kalluunka kalluunka iyo qotada dheeriga ah si loo ilaaliyo ilaalinta, caawimada iyo geesinimada.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikradda naqshadeynta filimka cusub ee ragga iyo dumarka.
Walaashka Tattoo Macnaha
Tattoo wolf waxaa loo isticmaali karaa in laga hadlo xoriyada doonka. Tattoo sidoo kale waxaa loola jeedaa jacaylka iyo ixtiraamka, xoogga iyo daacadnimada. Wolf wuxuu kaloo macnaheedu noqon karaa duurjoogta, qoyska, awoodda, dareenka, ilaalinta, xoriyada, noolaanshaha iyo waxyaabo kale oo badan. . Iyada oo ay ka soo jeedaan Siberia, yeyga waxaa loogu yeeraa inuu ilaaliyo carruurta aan waxba galabsan - waxaana si gaar ah loogu yeeraa in la hubiyo dhalmada caafimaadka leh. Eurasia hore, yeygu wuxuu ahaa ilaaliye sir ah. Sida muuqata haddii aad u yiraahdo yey ku yiraahdo yeygaaga sirtaada, waxaad ka saari jirtay culeyska qaadista inta uu yaxu cunuggu u yaqaano aqoonta weligeed ah.
Dadka u taga qashinka boodhka ah maaha kuwo xakameyn kara xadaarad maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin dareenkooda. Lovers duujintan tattoo si aad u muujiso sida ay awood ugu noqon karaan. Yaxaas waxaa la rumaysan yahay inuu yahay ilaaliyeyaasha kuwa dhintay. Tani waa sababaha badanaa lagu arki karo qabuuraha ama xabaalaha.
Tattoo wolfaha waxaa laga arki karaa meelo kala duwan oo adduunka ah waxaana ay matalayaan waxyaabo badan. Kala duwanaanshahani waa mid ka dhigaya mid aan caadi ahayn. Waxay matalaan
Adkeynta, Awoodda, Awood, Sharafnimada, Sharafnimada, Khatarta iyo Burburinta, Tamarta, Ilaalinta iyo Mas'uulnimada, Cibaadada iyo Dumarka Galmada. Tani waa sababta ay dad badani u isticmaalayaan.
Halkan riix halkan si aad u eegto fikrada naqshadeynta filimada ugu dambeeyay ee ragga iyo dumarka.
tattoos qorraxdaTilmaamta jaalaha ahtattoos sleevearrow Tattootattoos moonfikradaha tattootattoostattoos taajkiitattoos ubaxmuusikada muusikadalaabto laabtaDhaqdhaqaaqaTattoo infinitygaraacista gacmahatattoo biyo ahTattoo Feathertattoos qoortatattoo ah octopustattoo dheemansawirada gabdhahashimbir shimbirtattoos iskutallaabtatattoos saaxiib saxa ahtattoos cagtawaxay jecel yihiin tattooslibto libaaxtattoo maroodigaTattoos Wadnahacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahsawirada malaa'igtaJoomatari Tattoostattoo tilmaankoi kalluunkatattoo indhahalammaanahataraagada kubbaddasawir gacmeedshaatiinka shiidansawirrada raggahenna tattooku dhaji tattoosnaqshadeynta mehndijimicsiga bisadahatattoos qabaa'ilkagadaal u laabotattoos eagletattoos gacantawaxaa la dhajiyay tattoostattoos qosol lehTartoo ubax badan